जापान भ्रमण गर्न सबैभन्दा उत्तम समय कहिले हो? - Best of Japan
नारा पार्क, नारा, जापानमा प्यारा हिरण = शटरस्टक
जापान यात्रा को लागी वर्ष को सबै भन्दा राम्रो समय कहिले हो? उत्तर तपाईंको यात्राको लागि उद्देश्यमा निर्भर गर्दछ। सायद तपाई जापानको प्रसिद्ध चेरी फूलहरू हेर्न चाहानुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने, म अप्रिल को महीनामा जापान आउन सिफारिस गर्दछु। हुनसक्छ तपाईं सुन्दर हिउँ परेको दृश्यहरू हेर्न चाहानुहुन्छ? जनवरी देखि फेब्रुअरी मा होक्काइडो, तोहोकु वा नागानो भ्रमण गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यदि तपाईं शरद पातहरू रमाउन चाहनुहुन्छ भने, नोभेम्बरको वरिपरि सबै भन्दा राम्रो हो। यदि तपाईं होक्काइडोमा शरद leavesतु पातहरू हेर्न लाग्नु भएको छ भने, अक्टोबरको वरिपरि सबै भन्दा राम्रो हो। यो लेखले प्रत्येक मौसममा सबै भन्दा राम्रो सुविधाहरू हाइलाइट गर्दछ।
वसन्त - मार्च, अप्रिल, मे: सुन्दर फूलहरूको मौसम
गर्मी - जून, जुलाई, अगस्त: होक्काइडो र ग्रीष्म festivतुको सिफारिश गरिन्छ
शरद - सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर: क्योटोमा शरद पातहरू नोभेम्बरको अन्तमा हुन्छन्।
जाडो - डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी: हिउँद परिदृश्यको सिजन
माउन्ट फुजी, जापान = एडोब स्टक
हिमाची समुद्री किनारा पार्क, इबाराकी, जापानमा नेमोफिला
जापानमा वसन्तको समय मार्च, अप्रिल र मे महिनाहरूमा हुन्छ। मार्चको अन्तिम weeks हप्ताहरू र अप्रिलको पहिलो weeks हप्ता वसन्तमा यात्राको लागि उपयुक्त समयहरू हुन्। विद्यार्थीहरूले स्कूलको वर्ष समाप्त गर्दै छन् र कार्यरत वयस्क अझै काममा छन्। जापानी स्कूल वर्ष अप्रिल मा शुरू हुन्छ र मार्च मा अर्को वर्ष समाप्त हुन्छ। चेरी फूलहरू सामान्यतया स्कूल वर्ष बीच दुई हप्ता अवधिमा खिलछन्। तपाईं जापानमा कता जानुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्दै, तपाईं प्राय: त्यहाँ उपस्थित हुनको लागि एक चेरी खिलिको उत्सव फेला पार्न सक्षम हुनुहुनेछ। वसन्त मौसम दिनको समयमा उत्कृष्ट छ तर रातहरू अझै थोरै चिसो हुने सम्भावना हुन्छ
रंगीन फूल क्षेत्र र नीलो आकाश Shisisai-no-oka, Biei, Hokkaido, जापान मा = शटरस्टक
सुख्खा रूख र वन Biei, होक्काइडो, जापान मा = शटरस्टक मा ब्लू पोन्ड मा
जापान मा ग्रीष्मकाल जुन देखि अगस्त को हो। गर्मी मा, यो लोकप्रिय होक्कैडो गर्न को लागी चिसो तापक्रम मा प्रकृति को सबै सुंदरता लिन उत्तर यात्रा गर्न।
यद्यपि, सामान्यतया, जापानी ग्रीष्म veryतु एकदम तातो, आर्द्र छ र प्रायः तपाईंलाई शारीरिक तवरमा नै डुबाउँछ। आर्द्रता percent० प्रतिशत भन्दा माथि छ यी महिनाहरूको लगभग सबै समयमा।
स्कूल गर्मी छुट्टी जुलाई को बीच देखि अगस्त को अन्त्य सम्म चल्छ। यस समयमा जापानी स्थानीयहरू यात्रा गर्न मन पराउँछन्। लोकप्रिय पर्यटन स्थलहरु भीड हुन सक्छ र तपाइँ सम्भवत होटल र अन्य आकर्षणहरु को लागी शिखर मूल्य तिर्न हुनेछ।
गर्मी को समयमा यात्रा गर्नु राम्रो कारण तपाईले फेला पार्न सक्नुहुने जापानी चाडहरु नै हो। यदि तपाईं तातो ह्यान्डल गर्न सक्नुहुनेछ र गर्मी उत्सवमा भाग लिन चाहानुहुन्छ भने जुलाईको सुरूमा यात्रा गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
कियोमिजुडेरा, क्योटो, जापान = एडोब स्टक
क्योटो, जापान = शटरस्टकमा नदीको किनारमा शरद Araतुमा अरशिअमामा
शरद Septemberतु सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बर हो र जापान जाने उत्तम समय हो।
सबैजना स्कूलमा फर्किएका छन् र सेप्टेम्बर को पहिलो देखि कडा परिश्रम गरिरहेका छन्। तापक्रम राम्रो छ र आर्द्रताले ठूलो गिरावट ल्याउँछ।
क्योटो शहर जस्ता प्रमुख पर्यटक आकर्षणहरू, पातहरू सहित सुन्दर रूखहरू देखाउँछन् जुन जाडोको लागि तयारी गर्ने बित्तिकै सुनौलो रातो-खैरो रंगमा परिवर्तन हुन्छ।
त्यहाँ केहि राष्ट्रिय बिदाहरू छन् (सेप्टेम्बरमा २, अक्टोबरमा १ र नोभेम्बरमा २) जुन देशभरि यात्रा गर्ने व्यक्तिको स in्ख्यामा वृद्धि हुनेछ।
जापानमा चिसो, हिउँ पर्ने जाडो महिना डिसेम्बर देखि फेब्रुअरी हो।
यदि तपाईं हिउँबाट आनन्द लिन चाहानुहुन्छ र तपाईंको छुट्टीको समयमा स्की वा स्नोबोर्ड लिन चाहानुहुन्छ भने जापान सही स्थान हो।
होक्काइडो उत्कृष्ट हिउँ र स्की रिसोर्टहरूको लागि परिचित छ। निसेको स्की रिसोर्ट विशेष गरी लोकप्रिय छ। तपाईं धेरै ठूला रिसोर्टहरू नागानो र निगाता प्रान्तहरूमा पनि फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
निगातामा स्की रिसोर्टहरू सुविधाजनक छन् यदि तपाईं टोकियोबाट यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। यद्यपि हिउँ अपेक्षाकृत चिसो छ। यसलाई नागानोमा स्की रिसोर्टहरूसँग तुलना गर्नुहोस्, जस्तै हाकुबा र त्सुगाइके, जुन प्राप्त गर्न अलि गाह्रो छ तर तपाईं पाउडर हिउँको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
जापान मा, तपाईं स्की रिसोर्ट बाहिर बाहिर पनि धेरै हिउँ परिदृश्य पाउन सक्नुहुन्छ। म जाडोमा तातो वसन्त फेला पार्न सिफारिस गर्दछु। तपाईं एक बाहिरी स्नान प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जबकि एकै समयमा हिउँद दृश्यको मजा लिनुहोस्